Uhlaziyo lwabafowunelwa kuGoogle longeza ukhetho lokuvumelanisa abafowunelwa abagcinwe kwifowuni
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uhlaziyo lwabafowunelwa bakaGoogle longeza ukhetho lokuvumelanisa abafowunelwa abagcinwe kwifowuni
Uhlaziyo lwabafowunelwa bakaGoogle longeza ukhetho lokuvumelanisa abafowunelwa abagcinwe kwifowuni
Abanye benu banokuyazi loo nto Abafowunelwa bakaGoogle Ayinayo ukhetho lokugcina kunye nokuvumelanisa abafowunelwa abagcinwe kwi-smartphone yakho. Ukuba awenzi qhakamshelwano ngeakhawunti yakho kaGoogle, ayizukuvumelaniswa kunye nabanye abafowunelwa kwaye iya kuhlala kwifowuni.
Ngaphandle koko, unokwenza umnxibelelwano ngqo kwi-SIM okanye kwifowuni & kwimemori. Ukuba utshintsha iifowuni, abafowunelwa ogcinwe kwifowuni abayi kuvunyelaniswa neakhawunti yakho kaGoogle ukuze ubenokwazi ukuhamba nabo ngendlela elula.
Nangona kunjalo, AndroidPolice Iingxelo zokuba uGoogle uqalile ukukhupha uhlaziyo olutsha loQhakamshelwano olubonakala ngathi luzisa ukhetho olutsha oluvumela abasebenzisi ukuba babuyele emva kwaye bavumelanise abafowunelwa abagcinwe kwalapha ekhaya. Oku kwenziwa ngokuzenzekelayo ukuba uvumela inqaku ngokusebenzisa uguqulo olusanda kongezwa oluseto lweeapps.
Uhlaziyo alukhathazi abanini bePixel, njengoko ezi fowuni zithintela abasebenzisi ekugcineni oonxibelelwano ngqo kwifowuni. Inqaku elitsha likhutshwa ngokwamanqanaba kwiifowuni ezahlukeneyo. Okwangoku, kubonakala ngathi iyafumaneka kuthotho lwe-Samsung Galaxy S10, kodwa hayi kwiiflegi ezintsha ze-OnePlus.
huawei iqabane 10 us ukukhululwa
yintoni ukhuseleko lwe-wifi
usiba 4 vs usiba 5
Kufuneka ubandakanye ntoni kwiNgxelo yeBug?
Uyibuyisela njani kwiqhosha le-drawer ye-app kwi-Samsung Galaxy S8 / S8 +
Deal: Thenga iVerizon iPhone X okanye i-iPhone 8, fumana i-iPhone yesibini yasimahla (akukho ntengiso iyafuneka)
IGoogle Nexus 5 vs Motorola Moto X
Zonke iifowuni ze-Samsung Galaxy S20 zinengxaki yegumbi elingaphambi kwekhamera eliza konakalisa iiselfie zakho
I-Google Pixel Buds vs AirPods vs Galaxy Buds Plus iinkcukacha kunye neempawu
Insiza iya kukuvumela ukuba uthule kwaye usebenzise i-Pebble Watch yakho endala kunye nefowuni entsha ye-Android
Mini-LED iPad Pro bonisa imiba echaziweyo: Yintoni & apos 'ekhulayo' kwaye kukho ukulungiswa